Developing loyal employees in the hope that tourism will soon return to normal | Tourism News
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Mamolavola mpiasa tsy mivadika amin'ny fanantenana fa hiverina ara-dalàna ny fizahan-tany
Mamolavola mpiasa tsy mivadika amin'ny fanantenana fa hiverina ara-dalàna ny fizahan-tany
Aprily 2, 2021
Dr. Peter Tarlow dia miresaka momba ireo mpiasa mahatoky
Ny iray amin'ireo zavatra nianaran'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany tamin'ny areti-mandringana COVID-19 dia ny maha-zava-dehibe ny mpiasa tsara sy mahatoky.
Ny sehatry ny fizahan-tany dia fantatra amin'ny fihodinan'ny mpiasa be noho ny fahaketraky ny mpitantana karama matetika ary indraindray.
Ny mpiasa dia ireo mpiasa laharana voalohany manome loko ny traikefa fizahan-tany ho an'ny orinasa rehetra.
Tsy tokony hatao amin'ny mpampiasa ny manangana tsy fivadihan'ny mpiasa raha toa ka orinasa mahomby ny tanjona.
Toa mila mpiasa tsy mivadika ny tsirairay, saingy toa vitsy ny orinasam-pizahan-tany toa mahalala ny fomba hahazoana io fahatokiana io. Raha ny marina, ny fizahantany dia fantatra amin'ny fiovan'ny mpiasa ambony, ny karama ambany ary ny fitantanana matetika. Fahadisoana ny tsy mijery ny zava-misy fa ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa matetika dia misy akony amin'ny traikefa fizahan-tany ary mety ho lasa endrika lehibe amin'ny marketing tsara na ratsy.
Ny fitantanana tsara dia mitaona ny tsy fivadihana ary matetika dia miteraka karazana serivisy ho an'ny mpanjifa izay mamokatra mpanjifa miverimberina (mahatoky). Hanampy amin'ny famoronana tsy fivadihan'ity mpiasa ity Tidbits momba ny fizahantany manolotra sosokevitra vitsivitsy momba ny fomba hampitomboana ny tsy fivadihan'ny mpiasa sy hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa.
- Amin'ny indostria, toy ny fizahan-tany, izay kasain'ny olona hijanonana mandritra ny taona vitsivitsy, ny traikefan'ny mpiasa dia saika manan-danja tokoa amin'ny traikefan'ny mpanjifa. Ny antony lehibe sasany itarainan'ny mpiasan'ny fizahantany ny asany dia ny tsy fisian'ny tanjona voafaritra mazava, ny tsy fisian'ny asa sarotra ary ny tsy fisian'ny tambin-karama marina. Ireo dia faritra telo izay tokony hametrahan'ny fitantanana fizahan-tany fanontaniana manontany tena. Tsy afaka manao ny asany ny mpiasa raha miova isan'andro ny famaritana ny asany. Toy izany koa ny toerana misy ny maty tsy misy vintana handrosoana dia mitarika fandavana tsy hanao tsara ny asany. Amin'ny raharaham-barotra mavitrika toy ny fizahantany dia raiso ho toy ny vahiny ny mpiasa.
- Alao antoka fa fantatry ny mpiasa fa ao anatin'ny ekipa tokana ianao. Matetika ny fitantanana fizahan-tany dia voampanga (ary indraindray ara-drariny) amin'ny fanonerana ny tenany aloha ary manahy fotsiny momba ny mpiasa aorian'izany. Fantatry ny mpampiasa tsara fa ny fampiakarana karama dia zava-dehibe kokoa amin'ireo any amin'ny farany ambany amin'ny tohatra noho ireo any an-tampon'ny. Hamarino tsara fa mitarika ny mpiasa amin'ny ohatra ianao fa tsy amin'ny alàlan'ny teny fotsiny.
- Lazao izay antenainao amin'ireo mpiasa. Aza mandray na inona na inona. Zon'ny mpampiasa ny manantena fa hipetraka irery ny fampahalalana momba ny fahamarinana, fa ny olana manokana dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny asa, ary hihaino ny mpiasa alohan'ny hihetsika. Ny mpampiasa koa dia tsy manana ny zony fotsiny fa manana adidy hampitsahatra ny fifosana olona amin'ny asa iray, hampihatra ny lalàna miaro ny mpiasa hafa amin'ny toeram-piasana feno fankahalana sy ny resaka fanavakavahana ara-nofo, ara-poko ary ara-pivavahana.
- Ampio ireo mpiasa hahatakatra hoe inona ny karazana serivisy ho an'ny mpanjifa tadiavinao omena azy ireo mandray azy ireo ho mpanjifa. Ny mpizahatany dia mamaritra ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara ho toy ny fanomezana fahatokisana, fandraisana andraikitra ary lanja amin'ny fotoana (vola). Eritrereto ny fomba ahafahanao mandika ireo idealy fototra ireo amin'ny tontolon'ny asa. Tena azo itokisana ve ianao, manatanteraka fampanantenanao ve sa manonona izany tsotra izao? Moa ve ianao mamaly ny filàna manokana na mitanisa ireo fitsipiky ny orinasa fotsiny, ary mankafy (mahazo sanda) avy amin'ny asany ve ireo mpiasa sa mametraka fotoana fotsiny mba ahazoana karama?
- Ny mpiasa miasa tsara indrindra rehefa omena valisoa amin'ny asa vita tsara izy ireo. Ny kapoka tsara dia matetika mahavita zavatra betsaka kokoa noho ny negativa. Ataovy voafaritra tsara rehefa mankasitraka ny mpiasa ianao ary tsarovy fa ny valisoa kely omena matetika dia matetika dia mihoatra ny indray mandeha isan-taona no manome valisoa lehibe iray.